မန်းဂဇက် ရွာသူားတွေ ရဲ့လူငယ်တွေက်ို ပြောချင်တဲ့ စကားများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မန်းဂဇက် ရွာသူားတွေ ရဲ့လူငယ်တွေက်ို ပြောချင်တဲ့ စကားများ
မန်းဂဇက် ရွာသူားတွေ ရဲ့လူငယ်တွေက်ို ပြောချင်တဲ့ စကားများ
Posted by alinsett on Jul 9, 2013 in Creative Writing, Ideas & Plans, My Dear Diary, News, Think Different | 64 comments
ရြာသူရြာသားေတြ ရဲ့ဒႆနလက္ေဆာင္ အလင္းဆက္ ေျပာခ်င္တဲ့စကား
မန်းဂဇက် ရွာသူရွာသားများ က လူငယ်တွေကို ပြောချင်တဲ့ စကားများ
အသက် ၂၅ နှစ်စွန်းစွန်း လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အလင်းဆက် ။
ဘဝ ဆိုတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးဆီက သင်ယူစရာတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။
လေ့လာ စရာတွေ မှတ်သားစရာတွေ အများကြီးမှ အများကြီး ကျန်နေသေးတာပါလားးး။
ဖတ်စရာ စာအုပ်တွေ အများကြီး . ….
လုပ်စရာ အလုပ်တွေ အများကြီး . . ကျန်နေသေးပါလားးး ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ …………..ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော / ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်ခြင်းနဲ့သာ အမြဲလိုလို ရင်ဆိုင်နေရသော ဒီဘဝ ကို အလင်းဆက် ကြောက်ရွံ ့တွန့်ဆုတ်ခဲ့ဖူးတယ်။
အလင်းဆက် ရှင်သန် နေထိုင်ခွင့် ရ ထားတဲ့ ဘဝ အနေအထားက မလှပ ပါဘုူး ။
အခက်အခဲတွေ….. အတိုက်အခိုက်တွေ…… ပူပင်သောက တွေ…… နဲ ့ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမားတွေ ….ဆက်တိုက်လိုလို ကြုံတွေ ့နေရတဲ့ အလင်းဆက်ရဲ့ဘဝ ဟာ
နေပျော်စရာ တစ်စက်ကလေးမှ မရှိတော့သလို …..ဘဝကို ရှေ ့မဆက်ရဲ တော့လောက်အောင်ပဲ ရပ်တန့် ့ပစ်လိုက်ချင် ခဲ့ဖူးတယ် ။
အဆိုးနဲ့ အကောင်းက ဒွန်တွဲလာတတ်သေးတဲ့ မဖြစ်စလောက် မျက်နှာသာပေး ကံကြမ္မာကြောင့်သာ . . . ဘဝ ဆိုတာ တိုက်ပွဲတစ်ခု ပါပဲလေ ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ကလေးနဲ့……
အလင်းဆက် အခါခါ ကျရှုံးဖူးပါတယ်။
အလင်းဆက်ရဲ့ဘဝ မှာ ကြုံခဲ့ ရ /ကြူံနေရတဲ့ နာကျင်မှုတွေ ဆုံးရှုံးမှုတွေ……. အခက်အခဲနဲ့ အတိ်ုက်အခိုက်တွေ……. ပူပင်သောကတွေဆိုတာက …
တခြားသူတွေ အတွက်တော့ ဘာမှ မပြောပလောက်တဲ့ ရယ်စရာလေးတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် ။
ဒါပေမယ့် အလင်းဆက် ဆိုတဲ့ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ လူငယ်တစ်ယောက်အတွက်တော့….. ဒါတွေ ကြုံနေရတာဟာ ကြီးမားလှတဲ့ ပြဿနာကြီးတွေပါ ။
ထွက်ပေါက် ပိတ်သွားနေကျ အလင်းဆက်ရဲ့ ဘဝ အတွက် အားပေးစကားတွေ / အကြံပေးစကားတွေ / ခွန်အားသတ္တိပေးတဲ့စကားတွေက တကယ် လိုအပ်ပါတယ် ။
အဲဒီလိုပါပဲ . . . အလင်းဆက်လိုမျိုး ခပ်စုတ်စုတ်ခပ်ညံ့ညံ့ ဘဝ အနေအထားကို ပိုင်နေရတဲ့ တချို့သော လူငယ်ကလေးတွေအတွက်လည်းးး
အားအင်သတိ္တ ခွန်အားပေးသော အကြံပေးစကားလေးတွေက လိုအပ်မှာပါပဲ ။
အဲဒါကြောင့် အလင်းဆက်က အတွေ့အကြုံနဲ့ အတွေးအခေါ်ကောင်းသော မိတ်ဆွေတွေဆီက စကားလက်ဆောင်တွေ လိုက်တောင်းခဲ့ပါတယ် ။
ဒီ ဂဇက် ရွာ က မိတ်ဆွေတွေ ဆိုတာက အလင်းဆက် လေးစားရတဲ့ …..
အလင်းဆက် အားကျရတဲ့ အတွေးအခေါ် ပိုင်ရှင်တွေပါ ။
တော်သော ထက်မြက်သော အတွေ့အကြုံပိုင်ရှင်တွေပါ ။
( ဂဇက်က မြို့ ဖြစ်သွားပြီ ဆ်ိုရင်တောင် ကျွန်တော်ကတော့ ရွာသူားဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းလေးပဲ သုံးချင်တာ ။
အဲဒီ ဂဇက်ရွာသူ ရွာသားဆိုတာလေးက ပို ရိုးရှင်းပြီး ပို ချစ်စရာ ကောင်းသလားလို ့)
ဂဇက် ရွာသူားတွေ ဟာ……………
အတွေးအခေါ် သာ သော
အစွမ်းအစ ရှိသော မိတ်ဆွေများမို…… ဂဇက်မိတ်ဆွေ တချို့ဆီက စကားလက်ဆောင်တွေ လ်ုက်တောင်းပြီး စုစည်း ဖတ်ရှုခဲ့တယ် ။
အဲဒီ စကားတွေကြောင့် ကျနေတဲ့ အလင်းဆက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ အားပြန် တက် ခဲ့တယ် ။
အလင်းဆက် ကို အားတက်စေသော ……
သတိ္တိခွန်အားတွေ ပြန်ပေးခဲ့သော ………..
လမ်းပြစေခဲ့သော………. စကားလက်ဆောင်များကို စုုစည်းပြီး ပြလိုက်ချင်ပါတယ်။
အလင်းဆက်လို လူငယ်တွေ အတွက် တစ်နည်းနည်းနဲ့ အသုံးဝင် အကျိုး ရှိစေမယ်လို့ ့ယုံကြည်မိပါတယ်။
ပြီးတော့ လူငယ်တွေကို ပြောချင်တဲ့ စကားလက်ဆောင်ကောင်းတွေ ကို တစ်စုတစ်စည်းထဲ စုစည်း ပြသလိုက်ခြင်းအားဖြင့် …
အတွေးအခေါ်ကောင်းများးးးးး စွာ ပါဝင်ရေးသားထားတဲ့ ဒဿန စာအုပ်တစ်အုပ် လို ဖြစ်သွားမှာပါ ။
ကနားစီး = ဦးဂီ = လူငယ်တွေကို ပြောချင်တဲ့စကား
ဦးမာဃ = လူငယ်တွေကို ပြောချင်တဲ့စကား
တစ် ။ အမြင် ကျယ်ပါ
နှစ် ။ အသိ ရှိပါ
သုံး ။ သူများယောင်တိုင်း မလိုက်မိပါစေနဲ့
လေး ။ ဖြစ်ချင်တာ၊ ဖြစ်နိုင်တာနဲ့ ဖြစ်သင့်တာ ကို ချင့်ချိန်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ပါ
အန်တီပဒုမ္မာ = လူငယ်တွေကိ်ု ပြောချင်တဲ့စကား
အဟံပထမံ လုပ်ရဲကြပါ ။
အန်တီ လုံမလေးမွန်မွန် = လူငယ်တွေကိုပြောချင်တဲ့စကား
လူငယ်တွေအားလုံး ဘာသာရေး နဲ့ နိုင်ငံရေး ကို စိတ်ဝင်စားပေးကြပါ ။
အဘ နေဝန်းနီ = လူငယ်တွေက်ို ပြောချင်တဲ့စကား
အင်တာနက်ဆိုတာက ဂျီတော့နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်နှစ်မျိုးထဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။
ပညာရပ် အစုံကို တစ်ကယ်တတ်ချင်ရင် လူပုဂ္ဂိုလ်တစုံတရာမပါပဲ သင်လို့ရတဲ့ နေရာတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာ အများကြီးရှိပါတယ် ။
အန်တီသဲနုအေး = လူငယ်တွေကို ပြောချင်တဲ့စကား
အထူးသဖြင့် စည်းကမ်း နဲ့လိုက်နာသင့်တဲ့ လောကနီတိတွေ ကိုလေ့လာစေချင်ပါတယ်။
အမှီခိုကင်းတဲ့အောင်မြင်မှု့၊ ပိုင်ဆိုင်မှု့တွေကို ဂုဏ်ယူတတ်စေ ချင်ပါတယ်။
အန်တီ ရွှေကြည် = လူငယ်တွေက်ို ပြောချင်တဲ့ စကား
လူကြီးဆိုတာ တခါက လူငယ်ပါလို့။ နောက် အခု မမရွှေကလည်း လူကြီးစစ်စစ်မဟုတ်သေး။
လူလတ်လို့ပြောရမလားပဲ ဒီတော့ကာ လူငယ်တွေကို ဟိုလိုမနေ နဲ့ ဒီလိုနေလို့ပြောရင် နားလည်မှုမရှိတဲ့ ဇီဇာကြောင်တဲ့သူလို့မြင်ကြလိမ့်မယ် ။
အဲဒီတော့ လူငယ်များ ကိုယ်လုပ်ချင်တာသာလုပ်ကြပါ ။
ကိုရင်စည်သူ = လူငယ်တွေကိ်ု ပြောချင်တဲ့ စကား
ရာသီစာတွေ တစ်လီလီပြောင်းလို့ ကျွန်တော်တောင် ရင်ခုန်ခဲ့ရတဲ့ လူငယ်ဘဝလေးကို ကုန်ဆုံးခဲ့ရပြီ။
တက်တက်ကြွကြွ အရာရာကို စမ်းချင်နေတဲ့ လူငယ်ဘဝ
မူးယစ်ဆေးဝါး အပျော်အပါးတွေနဲ့တော့ လမ်မှားတော့ မလိုက်မိစေချင်ပါ။
တဖက်က အရာရာကို ခေတ်အမြင်ဖွင့် စူးစမ်းသင့်သလို
တဖက်ကလည်း ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ လောကဓံကိုရင်ဆိုင်ကြမယ်။
ဝီရိယဆိုတဲ့ လောင်းလှေခိုင်ခိုင်ရှိရင် လှိုင်းကြီးလည်း လှေအောက်ရောက်ရတာပဲ…
လက်တွေ့ကျတဲ့ အိပ်မက်တွေကို ကြိုးစားအကောင်အထည်ဖော်ရင်း
အနုပညာနဲ့ ဘဝအတွက် ရဲရင့်ကြစေလို။
အရှူံးအတွက် ပျော်ပျော်ကြီး သင်ယူ ရင်ဆိုင်ကြမယ်။
လှိုင်းလေတွေကြား ရုန်းကန်နေရတဲ့ ပင်လယ်ပျော်တစ်ယောက်ဘဝမို့
လူငယ်တွေကို ဒီလိုပဲ ရိုးရိုးပြောမယ်…
“ဘာပဲလုပ်လုပ် အဖြစ်ရှိအောင်တော့ လုပ်ကြဗျာ…”
ဦးဦးပါလေရာ = လူငယ်တွေကို ပြောချင်တဲ့စကား
လူငယ်ဘဝမှာ စိန်ခေါ်မှုှုတွေကို တစတစနဲ့ ပိုပိုုပြီး ရင်ဆိုင်လာရလေ့ရှိတယ်။
အဲသည်အခါ တစ်ခါတစ်ရံ အမှားတွေ လုပ်မိရင် စိတ်ပျက်သွားတတ်ကြတယ်။
အဲသည်အမှားတွေကို အရင်းလုပ်ပြီး အောင်မြင်မှု ကို ရအောင်ယူပါ။
အန်တီနေခြည် = လူငယ်တွေကို ပြောချင်တဲ့ စကား
လူငယ်ဆိုတာကို အကြမ်းဖျဉ်းတော့ အသက် ၁၈နှစ်ကနေ ၃၅နှစ်အထိ သတ်မှတ်ကြည့်လိုက်တယ်..။
လူငယ်ဆိုတာ အနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေပဲ..။
ဒါကြောင့် လူငယ်တွေဟာ အနာဂတ်အတွက် မိမိကိုယ်ကို ပျိုးထောင်ဖို့ သညာတင်မကပဲ ဘဝထဲကနေ ပညာတွေ သင်ယူရမယ်၊ ဆည်းပူးရမယ်၊
အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ လူကြီးတွေဆီက အကြံဉာဏ်နဲ့ ဗဟုသုတတွေ သိုမှီးတတ်ရမယ်…။
ဒါပေမဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်း လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းမှာ သူတစ်ပါးရဲ့အရိပ်လွှမ်းမိုးခြင်း မခံရပဲ ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီး ဆုံးဖြတ်ရဲတဲ့သတ္တိရှိရမယ်…။
မိမိဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကို လက်ခံရဲတဲ့ ရိုးသားမှုရှိရမယ်…။
မရင့်ကျက် မပြည့်ဝသေးတဲ့အရွယ်မလို့ တချို့သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေအတွက် စိတ်ဓါတ်ကျကောင်းကျမယ်…။
တခါတလေလဲ ကိုယ်လေ့လာဆည်းပူးခဲ့တဲ့ အသိပညာ အတတ်ပညာတွေအပေါ် မာန်မာနထောင်လွှားမိတဲ့အခါ ရှိကောင်းရှိမယ်။အဲဒီအချိန်တိုင်း သက်တော် ၂၉မှာ တောထွက်တော်မူပြီး သက်တော် ၃၅နှစ်မှာ ဘုရားရှင်အဖြစ်ပွင့်ထွန်းတော်မူလာတဲ့မြတ်စွာဘုရား ဝိရိယနဲ့ ဉာဏ်ပညာကို သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
အသက် ၂ဝကျော်မှာ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် စတင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီး အသက် ၃၂နှစ်မှာ တိုင်းပြည်ကို သူ့ကျွန်ဘဝက လွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ကျဉ်းပြီး
အသက်ပါစတေးသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သတိရလိုက်ပါ…။ဒါဆို လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ သိမ်ငယ်စိတ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ထောင်လွှားစိတ်အတွက် ပဲဖြစ်ဖြစ် ခွန်အားတွေ ပြန်ရလာမှာပါ…။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးကြီးတာက လူငယ်ဆိုတဲ့ကာလက အကန့်အသတ်ရှိတဲ့၊ အစားပြန်မရနိုင်တဲ့ နုပျိုမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် လူငယ်ဘဝမှာ တက်တက်ကြွကြွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့
ကိုယ်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့အရာတိုင်းကို ရိုးသားစွာ လုပ်ဆောင်ဖြစ်ကြဖို့ပါပဲ…။နောက်ဆုံးပေးချင်တဲ့ လက်ဆောင်စကားနှစ်ခုကတော့….
” There is no word ‘impossible’ in my dictionary” နဲ့
ဘယ်သူရေးတာမှန်းမသိပေမဲ့ ငယ်ငယ်ကတည်းက သိပ်ကိုနှစ်ခြိုက်ခဲ့တဲ့
“Ifaman looses his character, he will loose everything in life” ဆိုတဲ့ စကားလက်ဆောင်နှစ်ခုပါပဲ…။
ဦးဦး အံစာတုံး = လူငယ်တွေကိ်ု ပြောချင်တဲ့ စကား
လူငယ်တွေကို ပြောချင်တဲ့ စကားလို့ ဆိုလာတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ကြည့်မိတယ် (အသက်)
၂၆ ဆိုတော့ အလတ်စားတောင် မဖြစ်သေး (ထင်တာပဲ) ။
ဒီတော့ ကျုပ်က ကျုပ်ထက်ငယ်ရွယ်တဲ့ လူငယ်တွေကို ဘာပြောပေးရမလဲ။ မဟုတ်သေးဘူး။ ဘာပြောချင်တာလဲ ???လူငယ်တွေဆိုတော့ ပထမဆုံး ပြေးမြင်မိတာ ကျုပ်ညီနဲ့ ညီတစ်ဝမ်း၊ နှစ်ဝမ်းကွဲတွေ ….။
ဒီကောင်တွေကို ပြောချင်တဲ့ စကားတော့ ရှိတယ်။
ဒီကောင်တွေကို တွေ့တိုင်း ကျုပ်က ဆရာကြီး စတိုင်နဲ့ မိန့်မိန့်ကြီး ထိုင်ရင်း ခုလို ဩဝါဒ ပေးလေ့ရှိတယ်။“ခွီးသားတွေ … မိန်းမ စောစော ယူကြဟ”
ကျုပ် အနေနဲ့ လူငယ်တွေကို ပြောချင်တာ ရှိတယ်။
အဲ့ဒါ ဘာလဲဆိုတော့ ….“လောကဓံနဲ့ တွေ့လေတိုင်း မယိုင်မလဲဘဲနဲ့ ပျက်ရယ်ပြုနိုင်အောင် ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။”
ကျုပ်က အိညက်အိညက် ကောင်တွေဆို သိပ်မုန်းတာ။
ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာကို ကပ်သီးလေး ရှောင်သွားတာ၊ မချိုမချဉ် ပြုံးပြလိုက်တာ …
ဒီလိုမျိုး လူတွေဆို လွှတ်သဘောကျတာ ….။
လူငယ်တွေကိုလည်း ကျုပ်သဘောကျတဲ့ ပုံစံအတိုင်း …
ကောင်းတာ ဆိုးတာတွေနဲ့ တွေ့လာတဲ့အခါ တုန်လှုပ်မသွားဘဲ ပျက်ရယ်ပြုနိုင်စွမ်း ရှိအောင် ကြိုးစားကြစေချင်ပါတယ်။ကျုပ်ကတော့ (လောလောဆယ်) ဒါပဲ ပြောတတ်သေးတယ်။
ဦးဦး မိုဘိုင်း = လူငယ်တွေကိ်ု ပြောချင်တဲ့စကား
လူငယ်တွေကိုတစ်ခုခုပြောရမယ်ဆို ရင် ……..
ကျနော်အကို ပြောဖူးတဲ့ စကားလေးကိုပဲ ပြန်ပြောချင်ပါတယ်….
“ တစ်ခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာ ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့… အမှားမျိုးတွေကို လုပ်မိတာက ဘာမှပူစရာမလိုဘူတဲ့…
ခုနေငွေမရှိလို့ မရှင်းမဖြေရှင်းနိုင်ရင်လည်း ငွေရှိတာနဲ့ သူ့ဖာသာ ပြေလည်သွားလိမ့်မယ်တဲ့….
ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ အမှားတွေကို လုပ်မိပြီဆိုရင်တော့ မင်းကို ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ဘူးတဲဲ့” ……..
ဒီစကားလေးက ကျနော်အတွက် ခုချိန်ထိ အသုံးတည့်နေတုန်းပါပဲ….
ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို လူငယ်တွေ နားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်…———————————————————————————————–
အန်တီ ခိုင်ဇာ = လူငယ်တွေကိ်ု ပြောချင်တဲ့စကား
ဦးဦး မိုးမင်းသား = လူငယ်တွေကို ပြောချင်တဲ့ စကား
အကြိမ်တစ်ရာမြောက် ဆုံးရှုံးပြီးလျှင်… တစ်ရာ့တစ်ကြိမ်မြောက် ကြိုးစားရန် အသင့်ပြင်ထားပါ ။
အန်တီ ဝင့်ပြုံးမြင့် = လူငယ်တွေကို ပြောချင်တဲ့ စကား
ပညာကို ငွေနဲ့စက်ပြီး သင်ယူနေရတဲ့ခေတ်မှာ….. စာကြိုးစားကြပါလို့…. လူငယ်တွေကို တပြေးညီ မပြောရက်ပါ။
ရှေ့မျိုးဆက်က တာဝန်မကျေခဲ့လို့ ဒီကနေ့မျိုးဆက်သစ်လေးတွေ ဘဝနာတဲ့အထိ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ခေတ်မှာ..
သို့သော် သေချာတာလေးတစ်ခုတော့ ပြောခွင့်ရချင်သည်။
အလှအပ အဝတ်အစား ပကာသနအပြိုင်အဆိုင် လျှော့ကြပါ။
( အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးများ)
ငွေ၊ လုပ်အား၊ အချိန် သုံးမျိုးစလုံးကို ချွေတာနိုင်ပြီး အမှန်တကယ် အကျိုးရှိပါလိမ့်မည်။
ဒါ… ဘယ်သူပြောတဲ့စကားလဲ….?????
နှစ်ဂွေတရက် အသေမြတ် မရေမတွက် ဂဟေဆက်..
(ဦးဦးရေ.. လူငယ်တွေကို ပြောချင်တဲ့ စကားလေး.ပြောပါဦး.ဆိုတော့…အဲဒီ စကားကြီး ပြောလာပါတယ် ။ ဘယ်သူလို ့.. ထင်ပါသလဲ…..။ ဘာ ကို ဆိုလိုတာလဲ..ဆိုတာလည်း.အတော် တွေး..ယူလိုက်ရပါတယ် ။ )
အလင်းဆက် လက်လှမ်းမှီသလောက်နဲ့ အချိန်ရသလောက် သာ…… တောင်းထား ရတဲ့စကားတွေပါ ။
စကားလက်ဆောင် တောင်းချင်တဲ့ သူတွေ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီပိုစ့်ထဲမှာ….. မပါခဲ့သူ ….
သူကြီး တို ့…
အဘဖော တို ့….
လေးလေးဘလက် တို ့…
အသက် ငယ်ပေမယ့်.. အတွေးအခေါ်ကောင်းတွေ ရှိကြသူများမို ့….
အခြားးး မိတ်ဆွေများကလည်း … comment နဲ့ ဝင်ပြောပေးကြပါဦးနော် ။
ကုန်ကုန်ပြော ရရင်တော့.. …. ဒီ ပိုစ့်ကို ဖတ်မိတဲ့သူမှန်သမျှ…… ပြောသွားပေးကြပါပေါ့ ။
(ပိုစ့် မှာ ထည့်သုံးထားတဲ့ပုံလေးကို G00gle ကနေပဲ အလွယ်တကူ ယူသုံးလိုက်မိပါတယ် ။ ပုံ ဖန်တီင်္းသူ ကို ဒီနေရာကနေပဲ. ..တောင်းပန်အပ်ပါတယ် ။)
ဂလိုမှန်းသိ များဂျီးအားဂျီး ဆုံးမပါတယ်ဟယ်။
ကိုယ့် အသက်ငယ်တုန်းက လုံးဝမလုပ်ဖြစ်တာမျိုးတွေပေါ့။
နောက်မှ လူငယ်တွေ လမ်းမမှားအောင် အချစ် အကြောင်း ရေးပါအူးမယ်လေ။
အလင်း ဆက် says:
အချစ် အကြောင်းများ…မသိခဲ့ဘူး..ငယ်စဉ်က… အသက်အရွယ်မှာ….
အဲ….အဲ… သချင်းက ဆိုချင်သွားပြီ ။
သားက ခလေးးးးးဆိုတော့.. အချစ်အကြောင်း…တကယ် မသိသေးလို့ပါ ။
စကားလက်ဆောင် ရေးသားပေးတဲ့အန်တီ ဇာ ကို ကျေးဇူးးးး
(အကြောင်းအကျိုးကို သေချာအောင် တွေး ယူရင်း… ) ဝန်လေးတတ်တဲ ့သူ..ဆိုတော့..
ဒီ စကားကြိုက်တယ် ။
မွေးသဖခင်တွေ မွေးသမိခင်တွေကိုပါ တရားတန်းစွဲပလိုက်ရမလား ဟင်င်င်
အင်းးးးးး မပြောတော့ပါဘူး ။
ကံ(အလုပ်)အပေါ်ကြည့်ပြီး.. ထိုက်သင့်တဲ့.. အပြန်အလှန်လေးစားမှုပေးပါ.. လို့…။
အဖြူ မဟုတ်ရင်… မည်းမည်းကြီးပဲ…ဆိုတဲ့အယူ မဖြစ်သင့်ကြောင်းးးးးး
ကြားထဲ အရောင်စုံ ရှိကြောင်းးးး
ဆိုတဲ ့… သူကြီး အစိုကို ထောက်ခံဘာဒယ် ။
အရှေ့ အာရှမှာ အလွမ်းတတ်ဆုံး ယောက်ျားတယောက် says:
ဖတ်ရတာ အသီး ယော်တကားလိုက်တာဟယ်.. သဂျီးအစို ဆိုတော့ သဂျီးအခြောက်ပဲ ရှိနေသေးသလိုလို..
မူဂျာဟစ် ဂေါင်းဆောင် အယာတိုလာ မာမွတ်ခိုမ်က ရောင်စုံသူပုန်ခေတ်မှာ မွေးလာတာဆိုတော့ ပြောအားရှိတာပေါ့ဗျာ…. ကြုံလို့ ဓမ္မလက်ဆောင် တခုပေးလိုက်မယ်… သာဂျီးမာမွတ်ခိုမ် ဒီဘဝ သံဝေဂ မရလည်း နောင်ဘဝ အထုံပါသွားအောင်….
အဖြူမဟုတ်တာ အမဲလည်း မဟုတ်၊ အခြား အရောင်လည်း မဟုတ်ဘူး.. ဘာလဲမှန်းကြည့်…. တခုခု မဟုတ်တာ အဖြေမှန်…..။ ဒွန္နယာဂျီးမှာ လူတွေက ဒီတခုမဟုတ် အခြားတခုဆိုပီး လိုက်ရှာလို့ အတောမသတ် မျက်စေ့လည် တိုင်ပတ်နေတာ..။ ဒဿမကိန်း အကန့်သတ်မဲ့ရှိတယ်ဆိုတာ သိရင် ကိန်းနှစ်ခုအကြား ဘယ်လောက် လေ့လာစိတ်ခွဲလို့ ရမလဲ ဆင်ခြင်မနေဘူး…။ အငယ်ဆုံးနဲ့ အကြီးဆုံးကိန်း ဘာဖြစ်မလဲ တွေးမနေတော့ဘူး…။ ဂလောက်ဆို ကိုဘေးနွားကင်ဂျီးရယ်၊ သုညနဲတစ် ဒစ်ဂျစ် နံပါတ်တွေရယ်၊ လစ်ဘရယ် ဝါဒရယ်၊ သိပ္ပံစမ်းသပ်မှုရယ်၊ ထာဝရအသက်ရှုင်ဖို့ရယ်…. အဲဒါတွေသည် အမဲမဟုတ်တဲ့ အခြားကာလာတွေမှန်း အမြင်မှန် ရနိုင်လောက်ကောင်းပါရဲ့…..။
ဒီနေရာရောက်ရင် သဂျီး ဖောက်တွေ စိတ်စိတ်လာတယ် ထင့်
မနေ့က အမှားကြောင့်ပါ ၊
မမှားဘူးတာ ဘယ်သူမှ မရှိပေမယ့်
မှားသင့်တာမှားတာက ကယ်ဆယ်ရလွယ်ပါတယ် ၊
အဲဒီ အမှန်ကိုရှာဖို့ကြိုးစားရင်း အမှားတွင်းထဲ ခုန်ဆင်းသူမျိုးတော့ မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ ၊
အားလုံးမှာ သင့်တော်တဲ့ အသိဉာဏ်တော့ ကိုယ်စီပါနေကြတာပဲ ၊
စကားလက်ဆောင် လေးအတွက်..ကျေးဇူးပါ ။
လူငယ်တွေအတွက်.. တကယ်လိုအပ်တဲ့အမှားနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလေးကို ကြိုက်မ်ိပါအိ ။
မိုက် အသံနဲနဲ ညှိပေးပါလားကွယ်
ဟုတ်ပြီ ရပြီ ရပြီ ။
လူငယ်များသို့ ကျွန်ုပ် ပြောချင်တာကတော့
“လူငယ်များ လူကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါ ” လို့
ဟဲ့ ပလုပ်တုတ် ! အော်
လူကြီးဖစ်မှ… လမ်းကြောင်းရှင်းရှင်းနဲ ့…သွားလာနိုင်မှာ….
ချောင်း လုပ်ကြံခံရမှာလေးလဲ တွေးဦး
နီသာဆို အာဇာနည် မဖြစ်ဘဲ အသားလွတ် ကွိမှာ
အဲဒလို ချောင်း အရိုက်ခံရမှာကြောက်လို ့….
လမ်းကြောင်းမှာ.လုံခြုံရေးအပြည့်… လမ်းရှင်းမှု အပြည့်နဲ့သွားတာပေါ့ဟ ။
မကြောက်ရင်… ဒီ အတိုင်း…အေးအေးဆေးဆေး သွားမှာပေ့ါ ။
no no ဒါပြောဒါဟုတ်ဘူး
မကြမ်းနဲ့ အသက်ကြီးတဲ့အထိ အသက်ရှင်အောင်နေ။
ကောင်းလိုက်တဲ ့စကားးး ။
လူငယ်တွေအတွက်တော့ ခွန်အားတကယ် ရမယ် ့စကားပါ ။
ကိုယ်တွေက လူငယ်ဆိုတော့ကာ …
ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ရင်း … အထက်ပါ စကားများကို မှတ်ယူသွားပါတယ်ဗျို့ …။
ကိုရင် အလင်းဆက်ရေ ..
ကျုပ်မှာတော့ ပြောစရာ ဆိုလို့ …
ကျုပ်လို ၁၃နှစ်လောက် လမ်းမှား မရောက်ကျပါစေနဲ့လို့ …
လမ်းမှား မရောက်ဖို ့
စကားလက်ဆောင် ပေးသွားတဲ့ ကိုရဲစည်ရေ
တကယ်တော့ ဒီ ဂဇက်ထဲက လူငယ်ဆိုတာလည်း
အသက်ငယ်ပေမယ့် အတွေးအခေါ်ကောင်းတဲ့ လူငယ်တွေပါ
ဆိုတော့ ကျွန်တော်တော့ ဂဇက်ထဲက လူငယ်တွေကိုလည်း လေးစားပါတယ် ။
“ကုန်လွန်သွားတဲ့ အချိန်တွေကို ပြန်ကြည့်ပြီး နှမျောနေမယ့်အစား
ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို အချိန်မကုန်လွန်မှီ လုပ်လိုက်ကြပါ။´´
လေးလေး ခ ရေ
ကိုအလင်းဆက်ရဲ့ အဖိုးတန်ပို့စ်လေးကို share ခွင့်ပြုပါနော် …….
” ဘဝကို အပြုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ပါ။ ”
ဘဝမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ပဲ ရင်ဆိုင်ရပါစေ အရှုံးမပေးကြပါနဲ့။
အခက်အခဲကို တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ ……..
ရှယ်ပါဗျာ ရှယ်ပါ ။
စကားလက်ဆောင် ကောင်းလေး ပေးသွားတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ ဗျ
ဦး ကြိမ် says:
ညံ့ တာကိုသိခြင်းကအောင်မြင်ခြင်းရဲ ့အစ
သို့မဟုတ် …ညံ့ခြင်းရဲ ့အရှိန်ကို နှေးပြစ်နိူင်တဲ့နေ့ပေါ့….
စကားလက်ဆောင်လေး ဝ င်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ
ချစ်သော ဦးကြိမ် ရေ
လိုက်နာသင့်တဲ့ စကားလေးမို ့မှတ်သားလိုက်ပါပြီဗျ
ပြောရင် ကိုယ်က လူကြီး ဖြစ်ရပေတော့မှာ။
ဒီတော့ အတွေ့အကြုံ လေးတစ်ခု မျှမယ်။
ကလေး ဆီက ရတာ။
တစ်ခါက သူတို့ကျောင်းမှာ Role Play Games ကစားရတယ်တဲ့။
အဲဒီ Game က ကျောင်းမှာ ကလေးတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေ ကို ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီး ဗီဒီယိုပြချင်လဲ ပြ၊ ကလေး တွေ က သရုပ်ဆောင်ရင်လဲ ဆောင်ပေါ့။
(ဥပမာ – ကျောင်းမှာ သူများကို အနိုင်ကျင့်တဲ့ ကလေးတွေ တွေ့ချိန်၊ အများနဲ့ မရောဘဲ သီးခြားနေတဲ့ ကလေး ကို တွေ့ရင်၊ အဖွဲ့ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖို့ မှာ ကြည့်ချင်တဲ့ ကား မတူချိန် ၊ လမ်းမှာ အတန်းထဲကလေး တစ်ချို့ တယ်လီဖုန်း Box ကို ဖျက်နေတာ မြင်ရချိန် စသဖြင့်ပေါ့)
အဲဒါကို ကြည့်ပြီး ကလေး တွေ ကို မေးခွန်းလေးတွေမေး။
ဥပမာ – ဇာတ်လမ်းထဲမှာ တွေ့လိုက်တဲ့ ပြသနာလေး ကို ကိုယ်သာဆိုရင် ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲပေါ့။
အဲဒီကနေ ကိုယ်လုပ်မဲ့ဟာ၊ သူလုပ်မဲ့ဟာ တူချင်တူမယ်၊ ကွဲချင်ကွဲမယ်။
နောက်တော့ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းနိုင်မယ် ဆိုတာ ကို ဝိုင်းပြီး စဉ်းစားကြ။
လိုတာ ဆရာ က အကြံပြု ဝင်ဆွေးနွေးပေး။
အဲဒီကနေ ရလိုက်တဲ့ အသိကတော့ …..
ဒီ ကလေး တွေဟာ ငယ်ကထဲ က ပြသနာ တစ်ခု ကို တွေ့ရင် မစဉ်းမစား ဝင်ပြီး ပါဖို့ ထက် ကိုယ်က အဲဒီရဲ့ အပြင်ထွက် ပြီး အပြင်လူ အနေနဲ့ ကြည့် စဉ်းစား ပြီးမှ ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားလာတတ်ကြတာဘဲ။
သဘောကတော့ ၂ဖက်လုံး နေရာမှာ ဝင်ပြီး “ငါသာ အဲဒီနေရာ/ သူ့နေရာမှာ ဆိုရင်” ဆိုတဲ့ စိတ်ပေါ်ပြီး စဉ်းစားတတ်တာဘဲ။
အဲဒီကနေ လူလူချင်း စာနာ တတ်တဲ့စိတ် ဖြစ်တတ်လာတာလား????
ကိုယ်ရော အများပါ မကြိုက်ဘူးတဲ့ အလုပ် ကို မြင်ထားတာမို့ ကိုယ်က အဲဒီလို လုပ်ဖို့ ခဲယဉ်းသွားမဲ့ သဘောဖြစ်သွားသလား?????
တစ်ယောက်ထဲစဉ်းစားတာကနေ အများ အကြံ ကိုပါ အသိအမှတ်ပြုတတ်လာတာလား????
စောဘွဲ့မှူး ရေးခဲ့တဲ့ “မှားတဲ့ ဘက်မှာ” သီချင်းလို ကြိုက်တဲ့ ဘက် မှာ နေပြီး စဉ်းစားလို့ ရသား ပါဘဲ။
သူတပါး အများ ကို မထိခိုက် သ၍ အထိပေါ့။
မဖြစ်မနေ လိုရင်းကို ပြောကို ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ …
ကိုအံ့ကျော် ကို ကြိုက်တာ အပြစ်မဟုတ်ပါ။
ပရိုမဟုတ်တဲ့သူတွေနဲ့လွှတ်ထားြပြီး.. ဝိုင်းထောက်ပံ့(ထောက်ခံ)နေလို့ကတော့.. သစ်မရှိခင်ဝါးပေါင်းကွပ်သဘောမရပဲ.. ဗူးသီးနုနု အမွှေးသပ်ခံရတာပါပဲ..။
နမူနာ ယူစရာ အဖြစ်ကလေးနဲ့ စကားလက်ဆောင်အတွက်
အံ့ကျော်ကြီးကို ကြိုက်တာ နဲ့ ပက်သက်ပြီး တစ်ခု ပြောရရင်
ကျွန်တော် ဟစ်တလာကို အထင်ကြီးခဲ့ဖူးတဟ်
ဟစ်တလာမှာလည်း အထင်ကြီးလောက်စရာ တွေ ရှိတာပဲ ဆိုပီး
စကားလက်ဆောင်အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ အန်ကယ်ကြီးရေ
ဟုတ် ။ ကျေးကျေးပါ ဦးဦးရေ
ခုတလော ဖြောင့်မတ် ဖြောင့်မှန် တယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးကို သဘောကျနေမိတယ်။
ရိုးဖြောင့်တယ်၊ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်တယ်၊ မှန်ကန်တယ်။
ကိုယ်ကျင့်သီလရော၊ ကိုယ်ရည်ကို်ယ်သွေးပါ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မို့……
ဘဝတစ်လျှောက်လုုံးအတွက် ဖြောင့်မတ်ပါ၊ ဖြောင့်မှန် ပါလို့။
ကျေးဇူးပါ အန်တီမမရေ ။
ဒီပိုစ့်ထဲက စကားလက်ဆောင်တွေက အင်မတန် မှတ်သားထိုက်တဲ့
ပရင့် ထုတ်ပြီး မကြခဏပြန် ကြည့်မယ်
ကျွန်တော့် ညီလေး ကိုလည်း ပြမယ် ။
ko pauk mandalay says:
လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာနဲ့ လုပ်နိုင်တာကိုဘဲ ပြောသင့်ပါကြောင်း။
စကားလက်ဆောင်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါဗျ
အကုန်လုံးကို လာဖတ်သွားတယ်ဗျိုး… အဲ့ဒါ လာပြောတာ..
အလင်းဆက်ကို ကျုပ်ရဲ့ “ဘဝ”ဆိုတဲ့ပို့စ်မှာ ရေးခဲ့သလိုပဲ ပြန်ပြောပါရစေ…
Life is life, fight for it.” ― Mother Teresa
ဦးကြီး မိုက် ရေ
စကားလက်ဆောင်လေးအတွက် ကျေးကျေးပါ ။
ဒီပိုစ့်လေးကတော့ အင်မတန် လှပကောင်းမွန်တဲ့
စကားလက်ဆောင်တို ့စုစည်းရာ ပိုစ့်လေး ဖြစ်နေပါပြီ ။
တယ်များတဲ့ ဗဟုသုတ တွေပါလား။ သူတည်းတစ်ယောက် ကောင်းမှုဖို့ရာ လူအများက စေတနာထားတာ။
ဒါက ဒဿနာ စာအုပ်တစ်အုပ်လေ
စကားလက်ဆောင်လေး ပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ
ဘဘ လည်း ခေတ်မီအောင် ဝင်ပီး ဆုံးမပေးအံ …။
လာဂဲ့ .. ဟိုအကောင် အလင်းဆက် …
အုံး .. အုံး .. အုံး .. (ကျောဂုံးထုသံ)
ဂွပ် .. ဂွပ် .. ဂွပ် .. (ဂေါင်းခေါက်သံ)
ဟားဟားဟားဟား ( နာလို့ အော်သံ )
ဟီးဟီး ဟီးဟီး ( နာလို့ရီသံ)
ဝင်ကိုမပြောတာ .. ဘာလို့လဲဆိုဒေါ့ ….
အသက်နည်းနည်းရလာတဲ့အခါမှ … ဒီပို့စ်ကို တစ်ခါရှာဖတ်ပီး တစ်ခါပြန်မန့်ခဲ့မယ်
DEPARKO DEPARKO says:
ကျွန်တော်ကတော့ ၄၈ ဆိုတော့ လူမကြီးတကြီးပေါ့
ဒီနေ့ လူငယ်တွေဟာ အနာဂါတ်မှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကို ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မည့်
တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂါတ်ဟာ ယနေ့ လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ဓါတ် ခွန်အားနဲ့ ပညာရည်ပြည့်ဝမှုအပေါ်မူတည်နေပါတယ်။
လူငယ်တွေရဲ့ မျက်စေ့ကိုပိတ်မထားကြပါနဲ့။ အိပ်ပျော်မနေကြပါနဲ့တော့။
ဒီနေ့ပညာတတ်လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်ထွက်လုပ် ဦးနှောက်ယိုစီးမှုကြောင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ မွဲ တေနေခဲ့ရတာ။ နိုင်ငံခြား ထွက်လုပ်သူတွေရဲ့ အကြောင်းပြချက်က ဒီနိုင်ငံမှာ အလုပ်မရှိလို့ ပညာနဲ့တန်တဲ့ လုပ်ခလစာမရလို့ ။ ဒါနဲ့ဘဲအနောက်နိုင်ငံတွေဟာ လေ့ကျင့်ပြီး အရွယ်ရောက် လူငယ်တွေကို အလကားရလိုက်တော့ ပိုချမ်းသာ ပိုကြွယ်ဝ ပညာမဲ့တွေအများစုကျန်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်မှာ
လက်တစ်ဆုပ်စာ ပညာတတ် တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့သူအနည်းငယ်ရဲ့ အနစ်နာခံ ကိုယ်ကျိုးစွန့် တိုင်ပြည်ပြောင်းလဲအောင် လုပ်ခဲ့တာကို အလဟသမဖြစ်အောင် တတ်တဲ့ပညာရပ်တွေနဲ့
စကားလက်ဆောင်အတွက် ကျေးဇူးပါ ဦးဦးဒီပါ ရေ
အိပ် ရာက နိုး ပြီ ။
အိပ်ယာနိုးပြီးရင်မျက်နှာသစ် သွားတိုက် အိပ်ယာသိမ်းဆိုတဲ့ ပုံပြင်ဟောင်းတွေထဲက ရုန်းထွက်တော့
Zaw Thant says:
..ကိုယ်လည်းဝင်ပြီး ဆုံးမစကားပြောမဟဲ့ ဆိုပြီးဖတ်လိုက်ပေမယ့်.. အန်တီနေခြည်မှ ၁၈-၃၅ လူငယ်ဟု ဆိုလိုက်သဖြင့် ကိုယ့်ကိုကို လူငယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ပျော်ပျော်ကြီး သဘောထား ပြီး အသေချာဝင်ဖတ်သွားပါတယ်..
ကိုယ့်ကိုကိုယ် လူငယ်ဖြစ်ချင်လွန်းလို့ အတင်းဆွဲသွင်းထားတာ..။
ဂလိုမှန်းသိ ဘာ စကားမှ မပြောပါဘူးးးး
အလက်ဆင်းလုပ်မှ နာတို့ အာလဖွားယီးတွေ (စီဒီ တူ ဂီ) ဖြစ်ကုန်ပြီ။
ဒမယ် အလက်ဆင်းရဲ့ ညီး ချစ်သုဝေကို ကြိုက်တယ်မို့လား…
အိုက်ဒါဆို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ယဲဇားစကားသွားပျောစ် (ဟိုက ပါးချလဲ ခံပေါ့ကွီ)
ပြောချင်တာက ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို သတ္တိရှိရှိ လုပ်ရဲ ပြောရဲ ကြဖို့ပါ….
(သို့သော် ခြောက်တိုင်းလဲ မကြောက်နဲ့ မြှောက်တိုင်းလဲ မမြောက်နဲ့ပေ့ါအေ..အိုက်စကားပျောဖူးတဲ့သူချိရင် ဘဒူဖစ်ဖစ် ခွက်ဒစ်ပေးတယ်..ဒါဗြဲစ်)
ကောင်းပါလေ့ မချွေအိ ရေ
ချစ်သုဝေ ကို မရလည်း ဒေါ်ဖွားမေ ကိုတော့
ရအောင် ယူနိုင်မယ်လို ့
“WHO DARE WIN” ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဗြိတိသျှ တပ်ဖွဲ့ SAS ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးကို မျှဝေပါရစေ။
စကားလက်ဆောင်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ
Shar Thet Man (117724 Kyats )